Qalabka PlexEarth 2.0 Beta Waa La Heli Karaa - Geofumadas
Maalin ka hor Waan la hadlay iyaga oo ka mid ah nuqulada 2.0 ee PlexEarth Tools for AutoCAD ay keeni lahayd, mid ka mid ah horumarinta ugu wax ku oolka ah ee aan ku arkay Google Earth qayb ka mid ah xubin ka ah Network AutoDesk Developer Network (ADN). Maanta waxaa la sii daayay version Beta, waad soo dejisan kartaa, imtixaan iyo waxa muhiimka ah ee marxaladahaan: soo sheeg suurtagal cayayaanka.
Maxaa cusub ee version this
Waa wax xiiso leh in nooca Beta uu lacag la’aan yahay halka nooca ganacsiga la sii daynayo, -sida ku xusan wixii la ii sheegay- horaantii Juunyo 2010. Qofkii seexdaa ma awoodi doono inuu soo dejiyo.
Waxa ugufiican marka la barbardhigo wixii aan arkay maalmo kahor: Hadda waxaa lagu heli karaa Isbaanish iyo luqado kale oo ay taageerayaan AutoCAD sida:
Dabcan, noocani kuma shaqeynayo AutoCAD 2009 ama wixii ka horreeyay, laakiin wuxuu soconayaa 2010 iyo 2011. Waxay ku shaqeysaa:
AutoCAD® 3D® 2010-2011
AutoCAD® Khariidadda 3D 2010-2011
AutoCAD® Architecture 2010-2011Qiimaha iyo ruqsadahaMa aqaano qiimaha liisanka, taas waan ogaan doonaa tan iyo Juun. Waxa aan ogahay waa inaysan jiri doonin oo keliya hal nooc oo shati ah, laakiin Pro iyo Premium ayaa la maareyn doonaa, taas oo aniga ila muuqata inaan qiimeeyo qiimaha. Sidoo kale waxaa ii sheegay mid ka mid ah abuurayaasheeda, inay qiimo dhimis gaar ah siin doonaan kuwa soo dejinaya nooca Beta oo diiwaan geliya.
Version Pro: Tani waxay ka koobnaan doontaa sifooyinka isdhexgalka ee sawirada Google Earth, wax walbo ilaa hadda ma aanan arkin codsi kale si cad u sameeya:
Abuur masaxaadda sawirada, mid ka mid ah gobollada qowmiyadaha, gudaha garbaha ama wadada.
Muuqaalka sawir ahaan sida shakhsi shakhsi ah, oo lagu kordhinayo goob gaar ah.
Soo saar sawirrada joqraafiga ah ee AutoCAD ilaa Google Earth.
Sheyada waxsoosaarka Google Earth
Sawir ka dhoow dhibcaha AutoCAD, calaamado ama wadooyin adoo Google Earth ka soo qaadaaya.
Ku toosi khadka Google Earth, oo leh ikhtiyaari siyaabo ah, si aad u sawirtid dwg.
Waxaan ku riyaaqay ficilkan version of this, tan iyo hadda waxaa suurtagal ah in ay soo dejiyaan image in mooska ama sidoo kale ku salaysan yahay tiro badan.
El video lagu daabacay on Yutube Waa mid aad wax ku ool ah, waxay sidoo kale muujineysaa sida aad ugu soo dejisan karto jibbaar waddo mosaic ah ama sidoo kale marin (waddada).
Nooca Premium: Tani, waxqabadka qaabka dijital ah ayaa lagu dari doonaa, xitaa isagoo ku jira version aasaasiga ah ee AutoCAD, PlexEarth Tools wuxuu ku darayaa shaqooyinkaas oo kaliya oo laga sameyn karo Civil3D.
Ku dheji dhibcaha dhulalka iyo khadadka wareega (khadadka konka)
Abuuri dusha sare, tani waxay ka imaneysaa dhibcaha, xariiqyada jebiska ama qoraalada sareeya.
Xisaabinta xajmiga u dhexeeya dusha
Curricadaha heerarka, sida in Civil3D
Ku dhaji dhererka dhibcooyinka iyo abuuritaanka 3D polylines wadada.
Curebaha heerarka saxda ah, cabbirka dusha sare ama mugga.
Waxa kale oo uu leeyahay qalab lagu akhrinayo jilitaanka ama kor u qaadka macluumaadka, iyo sidoo kale aagga ama masaafada loo xisaabiyo.
Meelahaas labada waxaa laga dhoofin karaa Google Earth, ama barnaamij kale, sida Civil3D.
Post Previous" Hore PowerCivil loogu talagalay Latin America, aragti hore
Post Next Tijaabinta Goobta Wadarta Sokkia SET 630RKNext »
4 Jawaabo "PlexEarth Tools 2.0 Beta Available"
Juan Carlos Pineda isagu wuxuu leeyahay:
Kaalmo wayn, gaar ahaan baaritaannada hordhaca ah
Hagaag haa, waxay la timid buugaaga. In kasta oo kani yahay nooca Beta, kan ugu dambeeya wali lama hayo.
Waxaa jiri doona buug lagu heli karo qalabkan
Beta ayaa sidoo kale diyaar u ah AutoCAD 2010 iyo 2011 64.